🥇 ▷ Kaarka Apple wuxuu qaataa kiisaskiisii ​​ugu horreeyay wuxuuna u qalmaa ilaa $ 1300 ✅
Kaarka Apple wuxuu qaataa kiisaskiisii ​​ugu horreeyay wuxuuna u qalmaa ilaa $ 1300
Waxaa lagu dhawaaqay dhamaadka Maarso oo la bilaabay labo toddobaad ka hor, Apple Card waa mid ka mid ah alaabada inta badan saameyn ku yeeshay macaamiisha ku nool Mareykanka.
Waa kaadhka amaahda oo leh nashqadeeyaha ugu yar taasina waxay ka shaqeyn doontaa meelkasta oo adduunka ah oo Mastercard laga aqbalo. Faa’iidada “kaarka” kaarkan, ha noqoto mid jireed ama mid dijital ah (iPhone), waa inay soo laaban doonto boqolkiiba kharashyadaada.
Kaarka Apple waa kaarka deynta ugu raaxada badan maxaa yeelay waxaa lagu dhisay aluminium magaca magaca milkihiisana waa laser ku xardhan yahay. Dabcan ma aha mid kaamil ah oo dhismihiisuna wuxuu u oggolaanayaa in si fudud loo xoqmo oo haddii aad ku dhejiso boorsada jeexjeexeedu wuu dhammaanayaa.
Xaqiiqdi markii ay bilaabatay qeybinta labo todobaad ka hor, Apple He wuxuu macluumaadkan dul dhigay webka ka dib dhowr maalmood ka dib waxaa jira duruufo noocyo kala duwan leh oo ballan qaaday inay daryeelayaan Kaarkaaga Burburka Apple
Waa in la ogaadaa in Mareykanka uu yahay dalka tijaabada. Apple Wuxuu doonayaa inuu ku soo bandhigo caalami ahaan bilowga sanadka soo socdana wuxuu bilaabi doonaa fiditaankiisa.
Sidii la filaayay, kaararka amaahda ee dhammaan qiimayaashu waxay bilaabeen inay soo baxaan, laakiin dabcan waxaa jira shirkado si aad ah u sii socda. Kerf wuu sii socday oo wuxuu bixiyaa dabool “alwaax tayo sare leh” oo u dhexeysa $ 40 ilaa $ 140 doolar oo haddii tani u eg tahay wax lagu qoslo waa inaad ogaataa qiimaha daboolida Grey.
Thanks to iJustine waxaan baranay in Grey leeyahay laba dabool oo qaali ah oo aan macquul ahayn. Midka hore waa titanium iyo kaarboonka, oo qiimahiisu yahay $ 900. Tan labaad waa $ 1300 doolar waana dahaaran dahab.